FAHASALAMANA: Martin Vrijland
Ny moka izay mitarika ny vaksiny no ho avy
Filed in FAHASALAMANA	by Martin Vrijland	amin'ny 9 Febroary 2016	• 5 Comments
Sarotra ny mino fa ny viriosy zika dia tena loza mitatao ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Ny haino aman-jery mahazatra indray dia manaporofo indray fa ny herin'ny famerimberenana dia manaporofo fa mino izany ianao. Na izany aza dia mety ho fandrakofana ny fahadisoana amin'ny vaksiny natao tany Brezila, izay vehivavy bevohoka hatramin'ny 2015 [...]
Ny fampiasana zava-mahadomelina, ny solika CBD, ny psykose sy ny fahaketrahana
Filed in FAHASALAMANA	by Martin Vrijland	amin'ny 10 September 2015	• 11 Comments
Taorian'ny tantara rehetra momba ny mpitsoa-ponenana sy ny karazana fanadihadiana hafa rehetra, fotoana izao hananganana zavatra tsara indray. Raha ny zava-drehetra dia tantara rehetra izay manondro antsika fotsiny ireo olana eto amin'izao tontolo izao sy ireo drafitra manahirana ao amin'ny kilasy mitondra. Ny tantara izay mitondra anao izao dia [...]
Total visits: 14.666.716